Wasiirka Caafimaadka oo Sheegtay in 2 Qof ay u Dhinteen Coronaviras | XORRIYA NEWS
Home Wararka Wasiirka Caafimaadka oo Sheegtay in 2 Qof ay u Dhinteen Coronaviras
Wasiirka Caafimaadka oo Sheegtay in 2 Qof ay u Dhinteen Coronaviras
Wasiirka Wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka Bulshada Soomaaliya, Fowsiya Abiikar Nuur, ayaa xaqiijisay in 2 ruux oo kamid ah dadkii uu ku dhacay COVID-19 ay geeriyoodeen shalay, 19 kale oo xaalado cusubna ay soo kordheern.
Wasiirka ayaa shaacisay in guud ahaan tirada uu soo ritay cudurkaani ay noqdeen 135 ruux. Dadka gudaha dalka ugu geeriyooday cudurkaan guud ahaan waa todoba ruux.
Marwo Fowsiya Abiikar Nuur waxay warbixinteeda ku sheegtay inay socdaan qorshayaal iyo dadaallo wadajir ah oo lagu doonayo in sida ugu habboon looga hor tago khatarta cudurkaan, waxayna bulshada mar kale ugu baaqday inay qaataan talooyinka caafimaad.
Guddoomiyaha gobalka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Cumar Maxamed Maxamuud (Cumar Filish), oo isna ka hadlay qorshaha xakameynta COVID-19 ayaa caddeeyay in dowladdu ay bedeshay qaabkii loo aasi jiray dadka u geeriyooda COVID-19, lana diyaariyay kooxo gaar ah oo ka shaqeeya aasidda meydadka, taas oo qayb ka ah dadaalka loogu jiro horumarinta daryeelka bulshada.
Dowladda Soomaaliya ayaa dadaal xoogan ugu jirta ka shaqeynta bed-qabka bulshada Soomaaliyeed sidoo kalana ahmiyada saareysa xakameynta faafitaanka iyo saameynta xanuunka Coronavirus oo dhibaatada badan ku haya bulshada caalamka.